Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: Fanadihadina manokana	Miverena Hetraketraky ny fiainana – Mpivady sy ny mpanampiny novonoin’ny dahalo tamin’ ny fomba feno habibiana(0)TAO AMINA TSENA IRAY AMORON’NY LALAM-PIRENENA FAHAFITO, AO AN-TAMPON-TANÀNAN’ILAKAKA, NO NITRANGAN’ITY FAMONOANA OLONA AMIN’NY FOMBA FENO HABIBIANA ITY. TAMIN’NY 8 ORA SY SASANY ALINA, MAIZIN-KITROKA NY TANÀNA IRAY MANONTOLO, NANDRIAKA NY RA TAO AMINA TSENA IRAY TAO AN-TOERANA. MPIVADY ROA, RAMAROLAHY SAMUEL SY RAZAFINDRAMAVO HANTAMALALA, NIARAKA TAMIN’NY MPANAMPINY IRAY NO MATY TSY TRA-DRANO NOVONOIN’NY DAHALO TAO AN-TRANONY.
«Tsy misy tsy mahalala azy mivady ireo ny olona rehetra mpandalo ao Ilakaka. Toa vara-datsaka tamin’ireo olona nahalala azy mihitsy ny nandre ny fahafatesany sy ny fomba nahafaty azy. Tifitra roa no nahafaty ilay raim-pianakaviana, tifitra iray kosa no nahafaty ilay mpanampiny ary fira famaky sy vono kosa no nahafaty ilay renim-pianakaviana», hoy ny fitantaran’Andrianarivo Solofosoa, zana-drahavavin’ ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy.
«Manana tsena maromaro ao an-tampon-tanànan’Ilakaka izy mivady ireo, ka rehefa hariva dia mamory ireo mpiasany manao fivoriana kely. Tokony ho tamin’ny 8 ora sy fahefany alina teo ho eo no tapitra ny fivoriana. Lasa nivoaka ireo mpiasa rehetra ka tamin’izany no nanararaotra niditra ireo jiolahy. Raha vao tonga tao amin’ny efitra nisy azy mivady izy ireo dia nitaky ny vola rehetra. Tsy nahafa-po azy ireo anefa izay vola azony ka notifi­rin’izy ireo ilay raim-pianakaviana», hoy Rasoamalala Justine, mpitaiza ny zanak’izy mivady nahita maso ny zava-nitranga rehetra. «Notaritaritin’izy ireo tamin’ny volony nivoaka ilay ramatoa ka nampijalijaliany vao novonoiny. Diam-pamaky marobe no hita tamin’ny vatany, ny feny mitady hiala satria novoraborahin’izy ireo sahala amin’ny hoe nampijaliana mihitsy vao novonoina», hoy ihany io mpitaiza zaza, nahita maso ny zava-nitranga rehetra io. Vao naheno izany ilay lehilahy iray mpiasan’izy ireo, izay tsy iza fa fianakavian’ilay raim-pianakaviana ihany, dia saika hiditra hamonjy ka lehilahy iray nijoro teo amin’ny arabe no nitifitra ka nahafaty azy.
Vao tafaraka dia niara-maty
Amin’ny asan’izy mivady dia mahalana izy ireo no tafaraka ao an-toerana. «Lahatra angamba satria rehefa eo an-toerana ny iray dia tsy eo ny iray. Tamin’io anefa dia samy tao avokoa izy ireo ary niara-maty», hoy ny fitantaran-dRazanatsimba Marie Rosette, rahava­vin’ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy.
«Talohan’io dia nanafatra ahy izy hoe hapetrany aty, hono, ireo zanany telo mianadahy, 7 taona ny zokiny indrindra ary 3 taona kosa ny farany, fa aty no hampianarana. Tsy tanteraka anefa izany ka izaho no nandray ireo zanany ireo amin’izao izy efa tsy eo intsony izao», hoy ihany i Marie Rosette, rahavavin-drenin’ireo zaza.
« Nampalahelo ny nijery ireo zanany telo mianadahy, taorian’io voina io satria nahita maso ireo ray aman-dreniny novonoina mihi­tsy izy ireo. Tsy nahato­many mihitsy ireo zokiny roa voalohany fa ilay farany kosa indraindray mbola miantso tampoka hoe »iny i Dada »», hoy ihany Razanatsimba Marie Rosette, rahava­vin’ilay ramatoa maty.
Nalevina niaraka amina fasana iray Tany Ambalahazo Ambohimahamasina no nandevenana azy telo ireo ny talata 2 avrily lasa teo. «Fasana iray ihany no nandevenana azy ireo tamin’ izany ary natao nifanakaiky ny nofo mangatsiakany», hoy i Solofosoa, zanaky ny rahavavin’ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy. «Gaga avokoa ny olona rehetra tany tamin’io fotoana io satria isan’ny olona mamy hoditra ao amin’io tanàna nahabe azy mivady io izy ireo. Ny azo amehezana azy angamba dia hoe: banga ny fianakaviana sy ny fiarahamonina iray manontolo», hoy ny rahavavin’i Hantamalala, ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy.
Olona fito amin’izao fotoana izao no efa notanana am-ponja vonjimaika vokatr’ity raharaha ity. Isan’izany ny telo lahy voatondro ho nanao ny famonoana, olona telo mpiasan’izy ireo ary olona iray hafa ahiahiana ho mpaniraka azy ireo. Amin’ny 21 jona ho avy izao no hanaovana ny fanadihadiana lalina izy ireo.
Sary: Vonjy Radasimalala
Acupuncture – Teboka 800 amin’ny vatan’ny olona no azo itsaboana 5 000 TAONA ATY AORIAN’NY NIANDOHAN’NY ACUPUNCTURE NA NY FOMBA FITSABOANA SINOA AMIN’NY ALALAN’NY FANJAITRA: MANOMBOKA MAHAZO VAHANA ETO AMINTSIKA IZY IO ANKEHITRINY. TEBOKA 800 EO AMIN’NY VATAN’NY OLONA NO AZO ITSABOANA, HATRANY AN-TAMPON-DOHA KA HATRANY AM-PALADIA. NATAO HAMERENANA AMIN’NY LAONINY NA HAMPIRINDRA TSARA NY HERIM-BATANA NY «ACUPUNCTURE». ARETINA MARO NO AZONY SITRANINA. TSY VITANY KOSA IZAY MILA FANDIDIANA NA MISY OTRIK’ARETINA MIHANAKA.
Razam-be niaviana – Maro ireo fombafomba itovizan’ny Malagasy amin’ny Jiosy SAMY MANANA NY FOMBA FILAZANY AMIN’NY FIAVIAN’NY RAZAM-BEN’NY MALAGASY NY REHETRA. HEVITRA NALAZA SY NOVOIZINA TATO HO ATO NY FILAZANA FA AVY AMIN’NY JIOSY NY MALAGASY. TANTARA IHANY ANEFA IZANY HATRETO, ARAKA IRETO FIJOROANA VAVOLOMBELONA IRETO, FA TSY MBOLA NISY NANAMAFY KOSA. SAIKA FOMBA SY KOLONTSAINA ARY ENDRIKA AVOKOA NO AMBARAN’IREO MPAHAY TANTARA.
Asan-jiolahy sa… ? – Tovolahy kely iray sambany vao niakatra ny renivohitra nisy nikasa handoro tao an-tranony Vao mangiran-dratsy ny andro kanefa dia zava-doza no nanaitra ny mponin’Ankazolava ambony sy ny manodidina, ny sabotsy 27 avrily teo. Tovolahy kely 13 taona mantsy no voalaza fa nisy nikasa handoro velona tao an-tranony. Afaka nitsoaka ihany anefa io zaza io raha vantany vao nirehitra ilay trano.
Tovolahy vao nalaina niakatra avy any ambanivohitra izy io kanjo izao tra-doza izao. « Tsy nanana indra fo mihitsy ireo olon-dratsy fa notampenany tamin’ny lamba ny vavan’ilay zazalahy mba tsy ahafahany miantso vonjy ary nodoran’izy ireo avy eo ny trano », hoy Radasiarison Jean Baptiste, lehilahy monina eo ampitan’ilay trano nisy nandoro.
« Nivoaka nandeha nivalan-drano aho ny maraina tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany teo ho eo. Tsy nisy olona hitako mihitsy anefa na iray aza teo amin’ny manodidina. Tokony ho tamin’ny 5 ora dia nisy olona henoko nitsaitsaika ka nivoaka aho. Ny zanaky ny tompon’io trano may io no hitako ary nilaza izy ireo fa handeha hanao volo ka niverina natory indray aho. Tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany dia nisy nandondona mafy ny tranonay ka ilay zaza efa nifatotra teo amin’ny vavany sy ny tranony efa nirehitra no hitako. Taitra ihany aho satria mbola tsy nisy antsasak’adiny akory no nivoahako teo an-tokotany. Ilay fatorana teo amin’ny vavan’ilay zaza nigeja mafy dia mafy no novonjeko novahana voalohany », hoy ilay raim-pianakaviana mpiray vodirindrina amin’ity fianakaviana ity.
Avy any ambanivohitra
Raha ny fantatra dia vao sambany no tonga teto an-drenivohitra ity tovolahy ity ary vao volana vitsivitsy izay no naha teto azy. « Nantsoina avy any Antsirabe izy sy ny zokiny mba hitaiza ny zandrinay, izy rahateo efa tsy mianatra intsony », hoy Razanakolona Rolande, zanaky ny tompon-trano vavimatoa. « Raha ny fitantarany taminay,dia efa fanindroany tamin’io izay izy no notongavan’ireo olona ireo tao an-tranony tao. Somary nahavariana ihany anefa izany satria ny olona eto amin’ny manodidina dia tsy misy mahita ny hidiran’ireo ao mihitsy. Ny voalohany mantsy dia tamin’ny 1 ora antoandro izy no tonga tao izahay anefa amin’izany dia manao volo eto an-tokotany eto ary ny olona sasany manao « lôtô ». Ny tena mahavaka ny saina dia izy irery foana no milaza fa mahita ny hidiran’ireo olona ireo ao an-tranony fa tsy misy olon-kafa mahatsikaritra izany mihitsy. Raha ny fitantarany taminay dia nandrahona izy ireo nanao hoe tsy misy iray minitra no handoroanay ireo entana rehetra ireo », hoy ihany i Marie Hélène, mpiray vodirindrina amin’ireo niharam-boina.
Lehilahy lava be
« Lehilahy lava be foana izany no tantarainy aminay fa hoe tonga ao aminy rehefa izy irery no ao an-trano. Tany am-boalohany izahay dia tsy nisy nino, tapa-bolana nialoha io voina nitranga io, fa noheverinay fa mpiasan’ny Jirama nanao fizahana kaonteran-jiro ilay izy », hoy ny nambaran-dRazanakolona Fine, tompon-trano. « Rehefa niseho anefa iny sabotsy iny vao nino ny rehetra hoe tena nisy marina ilay izy », hoy ihany ity tompon-trano ity.
« Toa nilatsaham-baratra izahay raha vao nandre ny vaovao. Ary vao mainka taitra raha vao naheno azy nitantara fa ilay olona lava be indray no niverina tao », hoy ihany i Fine.
« Tonga teny an-toerana nijery ireo niaram-boina izahay teto amin’ny fokontany. Nozahana ifotony ihany koa ny fahavoazana nahazo azy ireo. Rehefa sendra voina sahala amin’izao mantsy dia misy ny tranom-pokotany ka ao no apetraka ireo olona ireo rehefa tena tsy azo ipetrahana intsony ny tranony », hoy ny fanazavan-dRatsirarison Martin Luther, sekreteran’ny fokontany eny Ambohitsoa.